Iimpawu ezi-12 zeSnob (+ Indlela yokujongana neNye) - Ibhlog
Iimpawu ezi-12 zeSnob (+ Indlela yokujongana neNye)
Mhlawumbi unaye umhlobo onokuthi asebenze kancinci ngamanye amaxesha. Mhlawumbi bahlala bethetha ngendlu yabo entle, imoto entsha, okanye izinto ezisandula ukuthengwa.
Banokukwenza uzive ungaphantsi, okanye benze ngathi bangaphezulu komntu wonke.
Ukuba awuqinisekanga ukuba ivela phi le nto, isenokuba ngumhlobo wakho osisigebenga.
Nazi iimpawu ezili-12 ze-snobs ukuze ukwazi ukubona ukuba ujongene nantoni.
Sikwanazo neengcebiso ezintle ngokujongana ne-snob ukuze ukwazi ukudlula kwesi sigaba sothusayo kubuhlobo bakho.
Iimpawu ezili-12 zeSnob
1. Bacinga ukuba bangcono kunawe.
Ngokwenkcazo, ii-snobs zicinga ukuba zingaphezulu komntu wonke ukuba zezona zibalaseleyo phaya. Bacinga ukuba banencasa ebalaseleyo, eyona ndlela ilungileyo, indlela yokuphila ebalaseleyo.
Ngelixa ukuzithemba nokuzithemba kulungile, oku kuyithatha kakhulu.
Ungaqaphela ukuba baziphatha ngokungathi bangaphezulu okanye bafumane iindlela zokuziphakamisa kwaye babonakale bebhetele kunokuba benjalo.
I-Snobs ikwanelungelo lokuba nelungelo-bacinga ukuba bafanelwe kokona kulungileyo, kwaye bafuna wonke umntu ukuba ayazi.
2. Bakrwada kukhetho lwakho.
Ungabona ukuba umntu ojija ubomi bakho uthetha krwada ngezigqibo zakho.
Banokukubiza ngokuba 'sisiseko' ngokuya kwiStarbucks kuba becinga ukuba indawo ezimeleyo yekofu abayifumeneyo ibhetele kakhulu.
Basenokuba bathetha ngendlela okhetha ukunxiba ngayo, abo uhlala nabo, abo uthandana nabo-ikakhulu, nantoni na abanokubeka izimvo kuyo, baya kuyenza.
3. Baqhayisa ngezinto abazikhethileyo.
Ngokufanayo ukubeka izigqibo zakho phantsi, ii-snobs zithetha kakhulu malunga nokuba zikhulu kangakanani bona are.
Banokuhamba beqhayisa ngobungakanani bencasa yabo, okanye indlela yokutyela abayifumeneyo emangalisa ngayo.
wazi njani ukuba ndiyamthanda
Ngelixa kumnandi ukwabelana izinto uyathanda, oonobangela baphuma ngaphandle ukubonisa ubungqina bokuba bona ngaphezulu kwabo bonke abanye.
4. Azikho ngaphezulu okanye zibubuxoki.
I-Snobs zihlala zijolise kakhulu kwinkangeleko, ke zinokuxhonywa kakhulu ekubeni nelebheli 'elungileyo' ezingubeni zabo.
Banokuza ngathi bayinyani kuba bazama nzima kakhulu ukuba balingane nokubumba kwemfezeko abazenzele yona.
Bahlala befuna ukubonwa njengoyena mntu ubalaseleyo onobomi obugqwesileyo, ngenxa yoko benza izinto ngokungakhathali kwaye ngokuyimfuneko benza ngalo lonke ixesha.
5. Basasaza ubomi babo kumajelo onxibelelwano.
I-Snobs inomdla wokusasaza oko bakuko. Iyintoni ingongoma yokumangalisa ukuba awunabani ongangqina, ngapha koko?
I-Snobs inokubaluleka kakhulu, nto leyo ethetha ukuba bacinga ukuba wonke umntu obangqongileyo uthe phithi ngabo kwaye uyafa ukufumana okungakumbi malunga nabo.
Kananjalo, babhala ubomi babo kwi-Instagram ukwenza abantu bazive bengaphantsi kodwa benomdla ...
6. Bathe phithi ziilebheli.
Kwakhona, ukubonakala kuyinto yonke kwizinto ezininzi ze-snobs. Bafuna ukuba uyazi ukuba iimpahla zabo zazibiza kakhulu, nokuba ikhaya labo lihonjiswe ngexabiso lempahla evela kwiivenkile ezipholileyo edolophini, kwaye imoto yabo yeyona ilungileyo.
Bafuna ukulunga kuhlobo oluthile lobuhle, kwaye bafuna ukubonwa njengezityebi kwaye baphumelele- yiyo loo nto ukubonisa iilebheli ezithile kunye nezinto eziyiliweyo kubaluleke kakhulu kwii-snobs.
7. Bathetha ngemali kakhulu.
Isiseko sokuba yi-snob singcono kunabanye abantu- kwaye imali inokunceda ngokwenene kuloo nto.
Abantu abaninzi bacinga ukuba kufuneka baqhayise ngokuba baphumelele kwaye banemali eninzi, njengoko becinga ukuba ibenza babe nomdla ngakumbi kwaye banomdla.
I-Snobs zihlala zicinga ukuba abantu baya kubathanda ngakumbi ukuba babonisa ukuba banencasa emnandi kwaye bahlala begxalathelana besenza izinto ezinomdla, ezibizayo.
8. Bacinga ukuba babaluleke ngaphezu kwabo.
Uninzi lwabantu aba-snobby bakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba bangcono kunabanye abantu.
Bazibona bephantsi kwesiseko kwaye bacinga ukuba 'izinto eziqhelekileyo' ezibangqongileyo zikhathazekile ngabo baziva ngathi ngabantu abadumileyo, phantse.
Kananjalo, bacinga ukuba yonke into abayenzayo inomdla.
Kutheni ndilawula kangaka kubudlelwane bam
9. Abangabo abahlobo kakhulu.
Ngelishwa, abantu abaninzi abazii-snobs banempawu yokungafikeleleki ngenene.
Ngelixa banokuba ngabathandekayo, abahlobo abathembekileyo phantsi kwayo yonke loo nto, bakhe i-facade enjalo ebonakala ngathi inkohliso kwaye ayinabuhlobo.
Usenokungaziva ukhululekile ukuncokola nomntu onwabileyo ngenxa yokuba unexhala lokuba ujongelwa phantsi kuwe.
Kuyacima ngokwenene kwaye sisizathu sokuba uninzi lwee-snobs lungahlali zinobuhlobo obuninzi bokwenyani.
Endaweni yoko, bangqongwe zezinye ii-snobs ezinokuthi zibajongele phantsi abanye abantu ngokudibeneyo, zikhuselekile kulwazi lokuba ziyinxalenye 'yeengcungcu.'
Wonke umntu ufuna ukuthandwa kwaye ubonwe njengomdla onomdla kunye nomtsalane, kodwa ii-snobs zingayithatha kakhulu.
Baye bazithande kwaye babe zii-narcissistic, batsalele kubomi bomphunga abazenzele bona.
I-Snobs icinga ukuba bonke bangabanye abantu abathetha ngabo, kuba bonke bona Cinga nge.
Bahlala bekhathazeka kakhulu malunga nendlela abajonga ngayo kunye nendlela abadibana ngayo, kwaye babanjwe kubo.
Oku kunokuthetha ukuba baya kude kakhulu kubuhlobo, kuba baxakeke kakhulu kukuzixakekisa okanye bachitha ixesha labo bezincoma kwaye besenza konke okusemandleni abo ukuba bazive ngcono kunaye wonke umntu.
11. Bazama ukunyanzelisa imigangatho yabo.
I-Snobs inokuzama ukusasaza imigangatho yabo phakathi kwamaqela abo obuhlobo.
Ungaqaphela ukuba ubusuku ngoku bujikeleze bona bezama ukukuqinisekisa ukuba nonke niye kwindawo entle, yexabiso eliphantsi ye-cocktail endaweni yendawo yokupapasha eqhelekileyo enanithanda.
Mhlawumbi bazama ukukunyanzela ukuba utye kwiivenkile zokutyela ezinamaxabiso kunye nabo xa unokufumana kuphela into yexabiso eliphantsi.
Basenokuzama ukukunyanzela ukuba uphile ngokwemilinganiselo abazibekele yona, enokubenza buthathaka ubuhlobo.
12. Bakubeka phantsi.
Njengakwimeko engentla, umhlobo wakho onomdla unokuzama ukukunyanzela ukuba ubathelele ' i indawo ukuze ibonwe, ’kuba befuna ukubonwa… ukubonwa phaya!
Oku kunokuya kwelinye inyathelo kwaye kunokubangela ukuba bagxeke incasa yakho okanye bakubeke phantsi ngenxa yokufuna ukuya kwiindawo eziqhelekileyo, okanye ngexabiso eliphantsi, ii-pubs ezinobubele okanye iivenkile.
Mhlawumbi bakuxelela ukuba uthandabuzekile okanye ungoyisi ngenxa yokufuna ukuya kwindawo yokutyela efikelelekayo, okanye bakubeke phantsi ngenxa yokungafuni ukubonwa kwindawo entle edolophini.
Indlela yokujongana ne-Snob
Ke, uzimisele ukuba umntu omaziyo sisnobhu. Yintoni elandelayo?
Baxelele ukuba uziva njani ngokuziphatha kwabo.
Uninzi lwee-snobs aluziqondi ngokupheleleyo izinto ezenzayo, kungasathethwa ke ngendlela ekunokukwenza uzive ngayo.
Babanjiswa ‘kukuphila obona bomi bumnandi’ kangangokuba bacinga ukuba wonke umntu wenza okufanayo.
Akukho nto iya kutshintsha ngaphandle kokuba bayayiqonda indlela ekuchaphazela ngayo indlela abaziphethe ngayo. Ngendlela ezolileyo, baxelele ukuba kuyakukhathaza xa bekubeka phantsi okanye benze ngathi bangcono kunawe.
Baxelele ukuba uyaqonda ukuba unokhetho olwahlukileyo kwezinye izinto, kodwa usafuna ukuxhoma kwaye uqhubeke nokwenza izinto enizithandayo.
ungazi njani ukuba umntu othile uyakusebenzisa
Kunqande ukubahlasela okanye ukudibana nabo njengabachasi, kodwa baxelele ukuba ubuxabise kakhulu ubuhlobo bakho nabo kwaye ufuna ukuthembeka ukuze ukwazi ukuya phambili- kunye.
Lawula isimilo sabo ngokunciphisa umda kwincoko.
Ukuba uyazi ukuba izihloko ezithile ziya kubangela isimilo esithile-ziphephe!
Mhlawumbi uyazi ukuba umhlobo wakho unazo, izimvo ezithile malunga nekhofi yobugcisa okanye iivenkile zokubhaka. Endaweni yokupheka ibhere ngokuthetha nge-Starbucks, thintela nje esi sihloko kunye.
Kuyacaphukisa ukuba kufuneka ubeke iliso okanye uzithathele ingqalelo kumhlobo wakho, kodwa kuya kufuneka uhlawule ngexesha elide bakuphuma kwesi sigaba sothusayo kwaye ubuhlobo bakho bunokubuyela esiqhelweni!
Qiniseka ngokuqinisekileyo ngokuziphatha okuhle.
Endaweni yokugxeka i-snob xa besenza izinto ngokungakhathali, yiba nesimo sengqondo esifanelekileyo xa bebonisa isimo sengqondo sokuguquguquka.
Ukuba bayakucaphukela iivenkile zokutyela kodwa beze kunye nawe kube kanye, baxelele ukuba kuthetha ntoni kuwe. Baxelele ukuba uyabaxabisa ngokwenza ulungelelwaniso ukuze ulungele uhlahlo-lwabiwo mali, kwaye uyayithanda into yokuba benze umzamo, nangona uyazi ukuba kuyangqubana nezinto abazithandayo.
Oku kuya kubenza bazive bengabahlobo abalungileyo kwaye kuya kubenza ukuba babe nethuba lokuphinda baphinde baphume kunye nawe ngolu hlobo kunokuba ungalatha into abayenzayo ‘engalunganga’ ngalo lonke ixesha!
Zama ukugqitha kuyo kwaye ungayihoyi.
Yibhuqe - akukho lula kodwa ungazama ukuchitha ixesha elithile usenza ngathi ayenzeki.
Ukukhanyela kunye nokuphepha ayizizo iindlela ezilungileyo zokulwa ixesha elide, kodwa kufanelekile ukunikezela ukuba obu snobbishness luphuhliso olutsha.
Umhlobo wakho unokuba nobunzima kwaye uzama ukuziqinisekisa ukuba bakhulu kwaye bayamangalisa kuba banokudipha ngokuzithemba, kwaye bayityabeka kuyo yonke imithombo yeendaba kuba bafuna ingqwalaselo kunye nokuqinisekiswa.
Ngokulinganayo, banokuthi benze ngenxa yokuba benoxinzelelo okanye baziva bexhalabile ngento ethile.
Zama ukuyityeshela le nto okwexeshana kwaye ubone ukuba kwenzeka ntoni - bakube befumene ukuba awuyivuzi indlela abaziphethe ngayo, baya kuyeka ukuyenza loo nto kwaye babuyele ekubeni ngumhlobo omkhulu owaziyo nothandayo ...
Imvo yelungelo: 5 Iimpawu eziCacileyo zomntu omnye
Indlela yokujongana noMntu ongenambulelo (+ 9 Signs Of One)
Iimpawu ezili-10 zoMntu oPhezulu kakhulu
Iimpawu ezityhila umntu ongenantliziyo
Iimpawu ezi-8 zoBuntu obuRhabaxa
yintoni iinyani ezimnandi ngam
menze abe nomdla kwakhona ngokungamhoyi
Uluxelela njani uthando ngenkanuko
xa uthanda umntu kodwa akakuthandi
kutheni ndingakhali xa ndifuna